सबैलाई चकित बनाउने दुनियाँको एकमात्र घडी, जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन « गोर्खाली खबर डटकम
पत्याउनु हुन्छ? धेरै सस्तो भयो सुनको मुल्य आज फेरी बढ्यो, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ?
भक्तपुरमै अक्सिजन खोज्दा खोज्दै दुई संक्रमितको ज्यान गयो, अक्सिजन अभाव बढ्दै
काेराेना भाइरस हावाबाट फैलने जोखिम हुन्छ – विश्व स्वास्थ्य संगठन
सबैलाई चकित बनाउने दुनियाँको एकमात्र घडी, जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन
१२ अंकलाई धेरैले अशुभ मान्दछन् । कसैलाई दशा लाग्दा वा आपत पर्दा मेरो त बाह्र बज्यो भन्छन् धेरै मान्छेहरु । बाह्र बजेको समय पनि धेरैले अशुभ काल ठान्छन् र कतै यात्रा गर्दा बाह्र बजेको समय छल्ने गर्दछन् । तर जति छले पनि एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा २ पटक त बाह्र बजेरै छाड्छ घडीमा । घडीमा बाह्र बज्नु प्राकृतिक नियम नै हो । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो घडी छ जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन । यो घडीमा किन बाह्र बज्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने तपाईं झनै अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
हो, स्विजरल्याण्डको सोलोथर्न सहरस्ति टाउन स्क्वाएरमा एउटा घडी छ । उक्त घडीमा कहिल्यै पनि बाह्र बज्दैन किनकि घडीमा केवल ११ वटामात्र अंक छन् । घडीमा १२ अंक गायब छ । त्यहाँसँगै रहेका अरु घडीमा पनि बाह्र बज्दैन ।
यो सहरको अर्को विशेषता भनेको यहाँका मानिसहरुमा ११ अंकप्रति विशेष लगाव छ । यहाँका जुनसुकै चिजको डिजाइन ११ अंकको आसपासमै घुम्ने गरेको छ । सहरमा चर्च तथा च्यापेलको संख्या पनि ११–११ रहेको छ । त्यसका अलावा संग्रहालय, ऐतिहासिक झरना तथा टावर पनि ११ नम्बरकै रहेका छन् ।सहरमा रहेको सेन्ट उर्सुस चर्चमा पनि ११ अंकको महत्व प्रष्टसँगै देख्न पाइन्छ । यो चर्च ११ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
त्यहाँ ३ वटा सिँढीको सेट छ र हरेकमा ११ वा पंक्ति रहेका छन् । साथै चर्चमा ११ वटा ढोका र ११ वटा घण्टी रहेका छन् ।सहरबासीहरुमा ११ नम्बरसँग यतिधेरै लगाव छ कि बालबालिकाहरुको ११ औँ बर्थडे विशेष रुपमा मनाउँदछन् । त्यस अवसरमा दिइने उपहारहरु पनि ११ अंकसँग विशेष सम्बन्धित रहेका छन् ।
न जिम गर्ने झन्झट न त डाइटिङ्ग नै, ल हेर्नुस त आयो वडी फिट हुने कपडा !!! (फोटो फिचर)
विवाह समारोहमा वेट्रेसले सासुको कपडामा तरकारी पोखाईन्, वुहारी यति खुशी भइन् कि साढे सात हजार त टिप दिईन् !!
रहेनन् प्रेमध्वज प्रधान,मदनकृष्ण श्रेष्ठले रुदैरुदै अस्पतालबाटै यशो भने
आफ्नै ‘खुट्टाको फोटो’ बेचेर महिनाको १२ लाख कमाउने बर्षिय युवती (फोटोफिचर)